Pane yakachengeteka iri 3D yakadhindwa yemagetsi motokari? Unoziva chivindi kurivhura? - China Cixi Lanbo Printing
3D NOMWEDZI IRAMBI
Transparent vangapiwa pla
Pane yakachengeteka iri 3D yakadhindwa yemagetsi motokari? Unoziva chivindi kurivhura?
3D zvokudhinda zvemichina kunobva digital womuenzaniso, achishandisa bondable zvinhu zvakadai weupfu simbi kana mupurasitiki kudhinda nemamiriro chinhu rukoko kubudikidza rukoko. Michina iyi ine kushanda muminda zvishongo shangu, maindasitiri design, kuvaka, engineering kuvakwa, motokari, Aerospace, uye dentistry.
Muna November 2010, munyika yokutanga motokari urbee akadhindwa pamusoro 3D aidhinda akabuda. Munguva ichangopfuura, Italian yemagetsi motokari mugadziri XEV vakazivisa kuti zvichaita pamwe China 3D aidhinda zvinhu kambani polymake kubereka 3D akadhinda yemagetsi motokari LSEV, ichazovapo panyika yokutanga guru-yakabereka 3D akadhinda yemagetsi motokari. Zvokugadzirwa kutenderera motokari iri pamusoro Muna 3 days, motokari ine pamusoro kumhanya 43 mph, neshoko rimwe chete nokuda 93 kwemakiromita, uye motokari yakazara anoyera 450 chete makirogiramu.
Chokwadika, muJapan Honda ichangobva akavakawo rimwe chokuyananisa emagetsi motokari, muviri rinenge riine ukomba 3D akadhindwa, uye ikozvino kushandiswa kunyanya kutumira mabhisikiti, asi Honda akati kuti muenzaniso zvakakodzera vakawanda kugadzirwa. Kunyange configuration hapana chaizvo mashoko pamusoro 3D akadhindwa motokari yemagetsi, kunyanya kuchengeteka data, sezvo inoshanda zvemichina, kunogona kuva zvigadzirwa kukanganisa indasitiri. Tinofanira kuva rakavhurika pfungwa kuchigamuchira. Kubva ano 3D akadhindwa motokari yemagetsi, vari pfungwa iri miniaturization uye yakaderera-nokukurumidza minda. Ndinotenda kuti pachava akakodzera mashoko pamusoro 3D akadhindwa motokari yemagetsi iri anotevera 1-2 Makore dzakadai kuchengeteka uye operability motokari. , Nyaradzo uye zvakawanda. The 3D okudhindira motokari yemagetsi iri kuchangotanga, uye kuchava nemirau mishumo pamusoro yakachengeteka bvunzo uye vatasvi ruzivo zvinotevera motokari, saka kuti motokari kuvimbwa nevanhu vatengi achava kumusika, saka nokufamba kwenguva, 3D akadhindwa motokari yemagetsi achauya. The zvakawanda kwezvipimo. Kutaura zvazviri, munyori asingadi kunotiyeuchidza kuvhura 3D akadhindwa motokari yemagetsi, kana 3D ichi okudhindira yemagetsi motokari mari yakaderera, kuchengeteka inosimbiswa, uye vanogona kusangana motokari yavo inoda tadii nayo!